JOEL HARISON MARIE RENE (CRAM) : Fanovàna rafitra ifotony no vahaolana hampandrosoana
Fifampidinihana, fifanakalozan-kevitra mianga avy any ifotony miafara amin’ny loabary an-dasy no ilaina raha tiana ny hampandroso an’i Madagasikara ka hialana amin’izao zava-misy mampikorontana ny Firenena izao. 13 septembre 2016
Tsy ny rafitra ihany anefa no mila ovaina fa ny toe-tsaina enti-miatrika izany.
Ny mpikambana mpanorina ny ny Cram (Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar) dia nandalina ny fiarahamonina mifototra amin’ny « Fokonolona fototry ny Firenena » sy ny rafitra ara-toekarena isam-paritra ary ny fomba hitantanana ny raharaham-bahoaka mifanentana amin’izany rafitra izany nandritra ny taona maro.
Ny fanorenana ifotony sy ny fanarenana ny Firenena no foto-kevi-dehibe nananganana ny Cram ny 18 avrilt 2009, izay efaa nahazoany taratasy fanamarinana teny anivon’ny minisiteran’ny Atitany mitondra ny laharana faha- 167 – MI/ANT/SPAT/ASS nivoaka ny 14 mey2009.
Amin’ny Cram ny fanorenana ifotony ny Firenena dia tsy azo atao ankamehana satria ny fanovàna tanteraka ny rafitra sy ny toe-tsaina dia miantoka ny ho avin’ny taranaka fara amandimby. Nandritra ny « Symposium national pour la restitution des îles malagasy », izay notarihin’ny « Association Nosy Malagasy » (ANM) tamin’ny 23 jolay 2016 tao amin’ny Lapan’ny tanànan’Antananarivo renivohitra dia nandray fehin-kevitra nasionaly ny mpizaika manerana an’i Madagasikara.
Nambaran’ireo mpizaika ao anatin’izany fehin-kevitra nasionaly izany fa « tsy maintsy hirosoana ny loabary an-dasy nasionaly ho fanorenana ifotony ny Firenena ». Efa mitsangana ny Komitim-pirenena izay ahitana solontena avy amin’ny Faritra 22 manomana ny loabary an-dasy nasionaly ho fanorenana sy fanarenana an’i Madagasikara . Afaka andro vitsivitsy dia ho fantatra ny daty sy ny toerana hanaovana izany.